Maamulka Hantidaaada Adiga Oo Nool | LawHelp Minnesota
Maamulka Hantidaaada Adiga Oo Nool
Maamulka Hantidaaada Adiga Oo Nool (PDF)478.92 KB
Horay U Qorsheynta
Warqadan xogta aruursan ahi waxa ay ka hadashaa walaayadaha, faa’iidooyinka ay leeyihiin haysashadoodu, sidda lagu helo.
Maxay tahay mamulka hantida adiga oo nool?
Maaamulka hantida waa dariiqo oo lagu maamulo hantidaada ma guurtada ah. Waxaad ka helaysaa faa’ido buuxda inta aad noshahay, iyada oo “qofka aad ku aamineyso” maareyn karo geeridaada ka dib. Haddii si wanaagsan loo maalgeliyo, waxa uu maamulka hantida kuu ogolaanayaa in hantidaas u wareegto qoyskaaga aad jeceshahay (ama samafal) marka aad geeriyooto iyadoo aan maxkamadaha dhaxalka.
Maamulka hantida waxaa la furaa adiga oo nool. Qaybo gaar ah oo ka mid ah hantidaada maguurtada ah ayaa lagu wareejiyaa xisaabta adiga oo weli nool. Marka aad geeriyooto ka dib, hantida maguurtada ah waxaa lagu wareejiyaa dadka dhaxalkaaga is leh iyadoo aan maxkamad maamulka ahntida aysan soo dhex gelin.
Xusuusnow, maamulka hantidu waxa uu khuseeyaa oo kaliya hantida ka diiwaan gashan oo keliya. “ Xisaabta Hantida Dardaaranka” waa in ay markasta la socotaa xisaabta maamulka hantida. Xisaabta hantida dardaaranka waa dukumeenti sharci ah oo xaqiijinaysa in hantidaada soo hartay si toos ah loogu wareejiyo xisaabta maamulka hantida ee aad adigu samamysay. Haddii la sameeyo xisaabta hantida dardaaranka ah, weli waxaa loo baahanyahay dardaaranka hantida ee maxkamadu maamusho.
Waxaa jiraa 2 nooc ee Xisaabta maamulka Hantida
Xisaabta Maamulka Hantida ee aan laga noqon Karin lama bedeli karo lama joojin karo marka la saxiixiay ka dib.
Hisaabta Maamulka Hantida ee laga noqon karo waa la bedeli karaa waana la xiri karaa markii la doono, inta aad adigu karti iyo awood leedahay.
Maxaa la iga doonayaa inta aanan asaasin xisaabta maamulka hantida?
Mar kasta waxaa wanaagsan in aad la hadasho garyaqaan, oo kaa caawimi kara go’aanka in asaasida xisaabtaan ay adiga kuu wanaagsantahay. Haddii aad goosato in aad asaasto Xisaabta Maamulka Hantida, garyaqaanku wuxuu kula qorayaa waraaqaha si loo xaqiijiyo in ay waafaqsan tahay waxa dantaada ah. Garyaqaanku wuxuu kaa caawimayaa in hantidaada ma guurtada ah aad ku dartid xisaabta maamulka hantida. Foomka ah in wax kasta meel lagu soo ururiyo adiga waxba kuma tarayo.
Maxaan yeelayaa haddii aan doonayo in aan furto xisaabo isku dhaf oo ay ka mid tahay tan Maabulka Hantida oo wada socota?
Ka feejignow qofkasta ee kugu cadaadinaya in aad iibsato xisaab wada socota ee lagu maamulayo hantidaada. Ha la xaajoon qof kasta oo raba in aad wax saxiixdo isla markaaba, ama raba in aad lacag bixiso adiga aan helin fursad badan oo aad baaritaan ku soo samayso. Shirkadaha qaarkood waxay rabaan qorshe isku xiran oo aay diyaariyeen in ay kaa gadaan. Shaqadooda ma aha sida qorshahaasi uu u buuxin karo baahidaada. Hadii “buuxi foomamka oo fur xisaabta” aan si wanaagsan loo samayn, waxaa laga yaabaa in ay dhibaato keento, oo kharaj badan ku kacdo si loo hagaajiyo. Waa suurta gal ah in aad keligaa samayn kartid xisaabtaas oo asaasi ah. Hubi in aad baaritaan badan samaysay si aad keligaa u asaastid xisaabta maamulka hantida. Waxaa jira bugaag kaa caawimi kara iyo barnaamij kombiyuutar oo ku caawimi kara. Waxaa kaloo jira dukumeenti si xiriirsan aad uga samayn karto foomka iyo tilmaan bixin intaba. Wax badan oo kuwaas ka mid ah waa lacag la’aan.
Laakiin, Haddii aad su’aal qabtid ama uu xaalkaagu dhib badan yahay, waxa mar kasta wanaagsan in aad la hadasho gar yaqaan.
Marka side u shaqaysaa?
Billowgu, waxaad samaysaa ama asaastaa xisaabta maamulka adoo saxiixaya heshiiska. Heshiiskaas waxa saxiixaya:
Qofka lacagtiisa iyo hantidiisa ma guurtada ah ay maamulayso xisaabtaas ( heshiis gale – adiga) iyo
Cidda maamulaysa xisaabta hantida la geliyay (qofka/hay’ada maamulaysa)
qofka/hay’ada maamulaysa waa in uu raacaa tilmaamaha aad ku qortay waraaqaha. qofka/hay’ada maamulaysa waa in uu sidoo kale uu raacaa sharciga lagu maamulo xisaabta hantida ma guurtada ah.
Markaas waxaad ku wareejinaysaa hantida aad leedahay in ay maamusho/maamulaan xisaabta maamulka hantida. Dadka macaash ka helaya hantida xilliga iyo geerida ka dib waxaa loo yaqaan Dhaxal sugayaal. Addiga ayaa macaash ka helaya hantida oo ah dhaxal suge inta aad nooshahay.
Dadka qaarkiis waxay jecelyihiin xisaabta maamulka hantida inta ay noolyihiin si ay isaga ilaaliyaan in ay ka tagaan dardaaran ay maxkamadu maamusho marka ay geeriyoodaan. Taxadar! Xisaabta maamulka hantida waa wax wareer badan, marka waa in aad ka fekertaa oo aad heshaa la talin sharci.
Maxay kala yihiin heshiis gale, qof/hay’ad maamul, iyo dhaxal suge
Marka laga hadlayo xisaabta mamulka hantida, heshiis gale waa adiga, qof/hay’ad maamul waa adiga, dhaxal suge waa adiga. Taas micneheedu waa hantidaada, adiga ayaana maamulaya inta aad nooshahay. Marka aad geeriyooto, hantidu waxay u wareegaysaa dhaxal sugayaasha ee aad ku qortay xisaabta.
Fiiro gaar ah: Khasab ma aha in aad tahay qof/hay’ad maamul hanti. qofka/hay’adda maamul hanti wuxuu noqon karaa qof kale ama shirkad maaliyadeed sida bangiga. Waa in aad magacowdaa cid kale oo qof/hay’ad maamul hanti ah oo ku bedela marka aadan adigu xisaabta mamuli kari weydo iyo marka aad geeriyooto. Haddii aadan magacaabin qof kale ee kaala wareega, markaas maxkamadda ayaa soo dhexgelaysa – taasi waxaa ku baxa kharja fara badan, waxayna noqon kartaa wax aadan rabin in ay dhacdo!
Qof nool maka maarmi karaa in maxkamaddu maamusho dhaxalka?
Haa. Tani waxay ka mid taahy faa’iidooyinka waaweyn ee ay leedahay xisaabta maamaulka hantida. Marka aad geeriyooto kadib, qof/hay’ad maamusha hanti, ama ku xigeenkooda koowaad waxay bixin karaan hantida ku jirta xisaabta oo ay siinayaa dadka iska leh dhaxalka iyadoo aan loo baahan maxkamad. Tani waxaa lagaga maarmaya kharajka iyo dib u dhaca ka yimaada dhaxalka maxamaddu maamusho. Sidoo kale isticmaalka xisaabtan waa wax gaar loo leeyahay, lamana mid aha dhaxalka ay maxkamadu maamusho oo dadweynuhu leeyhiin oo qof kasta arki karo. Fiiri xogta urursan, Su’aalaha Ku Saabsan Dhaxalka.
Ma jiraan siyoobo kale oo aad isaga ilaalisid in maxkamad maamusho dhaxalka?
Haa. Waxaa jira tusaalooyin:
Haddii laba qof ay wada leeyihiin hanti ma guurta ah sida mulkiyad la wadaago, inta badan tan laguma samayn karo dhaxal maxkamad maamusho. Marka qof geeriyooda, hantida waxaa si toos ah u yeelananya qofka nool.
Looma baahna dhaxal maxkamad maamusho haddii qofku magacaabo cidda dhaxlaysa. Tusaale, cayminta nolosha lacagtu waxay si toos ah ay u aadaysaa ka dhaxal sugaha la magacaabay iyadoo aan loo dirayn maamulka dhaxalka ee maxkamada. Sidaas waxa la mid ah xisabta bangiga.
Waxaad u isticmaali kartaan u wareejinta hantida aad ka geeriyootay, halkii ay ka aadi lahayd maxmamad maamulka dhaxalka oo gurigaaga siin lahaa qof kale. Fiiri xogta urursan Wareejinta Hantida Geerida Ka Dib.
Xisaabta maamulka hantida ma i caawimi kartaa haddii aanan maamuli Karin hantidayda ma guurtada ah?
Haddii xisaabtaas la sameeyay adiga oo karti iyo awood leh, qof/hay’ad maamul hanti ayaa kuu maamuli kara hantidaada haddii aad noqoto qof aan go’aan isu gaari karin. Hantida waa in laguugu maamulayaa sida ugu wanaagsan ee dantaadu ku jirto intaad nooshahay.
MUHIIM: Waxaad u baahantahay in aad yeelato wakiil ka noqosho sharci ee maamula hantidaada aan ku jirin xisaabta maamulka hantida. Tusaale IRA laguma dari karo xisaabtaas. Markasta waa in IRA ay magacaaga ku qorantahay. Fiiri Wakiil Ka Noqosho Si Sharci Ah.
Keebaa kharaj badan ma xisaabta maamulka hantida mise dardaaran?
Haddii aad qof lacag ku siinayso xisaabta maamulka hantida si ay kuu caawiyaan, dhab ahaantii way ka kharja badantahay in aad qorto dardaaran.
Madaama xisaabta maamulka hantida ay tahay wax dhib badan, qareenks diyarinaya kharaj badan ayuu qaadanayaa in uu diyaariyo xisaabtaas marka loo eego dardaaranka.
Xisaabta maamulka hantida waxay shaqaysaa marka aad hanti ku wareejisid. Inta badan waxaad u baahantahay garyaqaan marka aad samayneyso wareejinta, gaar ahaan haddii aad wareejinayso hanti ma guurto ah.
Haddii xisaabta maamulka hantida ay tahay shirkad maaliyadeed, waxay ku saaraysaa kharajka maamulka.
Laakiin waqtiga dheer, waxaa laga yaabaa in ay jabantahay xisaabta maamulka hantida, marka loo eego dardaaranka, maxaa yeelay waxay ka shaqaynaysaa hab raaca dhaxalka maxkamadu maamulayso.
Su’aasha dhabta ah in laga jawaabo waxa ay tahay: Kee baa adiga kharaj badan, ma xisaabta maamulka hantida mise dhaxalka hantida ma guurtada ah ee ay maxkamadu maamusho?
Ma ii wanaagsantahay in aan yeesho xisaabta maamulka hantida hadii aanan lahayn hanti ma guurto ah ama hanti maaliyadeed oo badan?
Waxaa laga yaaba maya. Maxaa yeelay hantida maaliyadeed waxaa lagu maamuli karaa wakiil ka noqosho sharci waxaana la siin karaa qofka aad adigu u magacawday ee ah dhaxal suge.
Laakiin mar marka qaar, waxaa jiri kara sabab wanaagsan oo aad u rabto in ay maamusho xisaabta maamulka hantida. Tusaale wanaagsan waxaa ah haddii ay jiraan dad badan oo aad doonayso in ay hantidaada qaataan marka aad geeriyootid. Tan laguma samayn karo wareejinta hantida aad ka geeriyootay ama dhaxal sugaha aad ku cayintay xisaabta bangiga.
Xisaabta la aaminay ee maamulka hantida ma ilaalinayaan hantidayda haddii aan galo guryaha xanaanaynta dadka waaweyn ama aan u baahnahay guri daryeel?
Haddii aad codsato gargaar caafimaad in ay kaa bixiyaan daryeel waqti dheer qaata, gobolku wuxuu ka dhigayaa hantida ku jirta xisaabtaaas hanti u diyaar ah. Taas micneheedu waxa weeye waa hanti aad u isticmaali karto in aad ku bixiso daryeelkaaga. Waa in aad isticmaashaa hantidaas si aad ugu bixiso faa’iidooyinka ay ka mid tahay gargaarka caafimaadka (MA). Dhibaatooyinka oo kale waa sababaha loogu baahanyahay in aad la xiriirto garyaqaan haddii xisaabta maamulka hantidu uu micne kuu samaynayo.